News 18 Nepal || आज अमेरिकी डलरसहित कति पुग्यो विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?
आज अमेरिकी डलरसहित कति पुग्यो विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहिबार जारी गरेको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यस्तै, युरो एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, पाउण्ड एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ २ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ । यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी, युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ । यता, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८३ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ८३ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ । यता, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ८८ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर ८८ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ ।
सिंगापुर डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ । यता, जापनिज एन दशको खरिददर ११ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ । चाइनिज युवान एकको खरिददर १७ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।
यता साउदी अरब रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ । थाई भाट एकको खरिददर ३ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ । यता साउथ कोरियन वन सयको खरिददर १० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ ।
Exchange Rate for 08 October 2020
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency Unit Buying/Rs. Selling/Rs.
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ.
आज शुक्रबार, कस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?
सुन चाँदीको मूल्य बढ्यो, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
सुनको भाउ घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
पूर्वमन्त्री बास्कोटादेखि एबीसी टेलिभिजनले तिरेन भ्याट, अरु को को छन् ?
बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
अमेरिकी डलरसहित कति पुग्यो विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?
सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि फेरी संसोधनः अब १० शिर्षकमा कर्जा दिइने
बिजुलीको महसुल घटाउने सरकारको तयारी, यस्तो छ कारण